कस्तो शिक्षा ? कस्ता शिक्षार्थी ? – KhabarChakra
in अभिमत / गृहपुष्ठ / पत्रपत्रिकाबाट — by KhabarC —	February 2, 2019
०७४ वैशाख १ देखि ०७५ माघ १ सम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिने विद्यार्थीको संख्या एक लाख आठ हजार २९ छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी ६१ हजार ९७८ (५७.३७ प्रतिशत) अस्ट्रेलिया जानेको संख्या छ भने दोस्रोमा जापान जानेको संख्या १६ हजार ५३ (१४.८५ प्रतिशत) छ । १ साउन ०७५ यताको ६ महिनाको आँकडा हेर्ने हो भने त्यो संख्या ३४ हजार ५२० देखिन्छ । जसमध्ये अस्ट्रेलिया जानेको संख्या २१ हजार ९०४ (६३-४५ प्रतिशत) छ । ०६८-६९ मा यस्ता विद्यार्थीको संख्या जम्मा १० हजार ३२४ थियो भने ०७०-७१ मा २८ हजार १२६ र ०७२-७३ मा ३२ हजार ४०९ थियो । यी तथ्यांक भन्दै छन्, यसरी बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ ।
नयाँ पुस्तामा विदेश मोह किन बढ्दै छ ? विश्वको प्रतिस्पर्धी जनशक्ति बन्ने चाहना हो वा रोजगारीको खोजी ? उनीहरूको पहिलो रोजाइ अध्ययन हो वा आय आर्जन रु उनीहरू देशभित्र सन्तुष्ट हुन किन सकेनन् ? देशमा अवसर नदेखेर विदेशमा बरु भाँडा माझ्न, भरिया हुन, तरकारी तथा फलफूल टिप्न, घरको काम गर्न पलायनको बाटो रोज्नु उनीहरूको रहर हो वा बाध्यता ? सबैको मथिंगललाई जरैदेखि हल्लाउने सवाल हुन् यी । तर, दुःखद पक्ष यी सवालमा कुनै गहिरो खोज भएको पाइँदैन ।
देशलाई चाहिएको र अपुग भइरहेको जनशक्ति धमाधम बिदेसिने प्रक्रियालाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ दिएर प्रोत्साहन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई अब कसरी रोक्ने रु के यस्तै अवस्था विद्यमान रहँदा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल होला रु उच्च शिक्षाको उल्लिखित आँकडा, रोजगारीको अवसर र ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिने विद्यार्थीको संख्याबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।
देशको सामथ्र्यसँग नजोडिएको वा जमिनमा नटेकेको शिक्षाले देशमा कुनै योगदान दिन सक्दैन । जहाँ स्कुले विद्यार्थी कक्षामा पढ्दै गर्दा देशको भन्दा विदेशका सपना साँच्छन्, देशमा रहँदा भविष्य अन्धकार छ भन्ने ठान्छन् भने त्यहाँको शिक्षालाई कस्तो मान्ने रु आजका नेपाली विद्यार्थीको मनोदशा योभन्दा भिन्न छैन । अभिभावकहरू खाई–नखाई उनीहरूका मनोभावना पूरा गर्न मरिमेट्छन् । यही मनोविज्ञानको विकसित रूप नै बर्सेनि हजारौँ विद्यार्थीको हातमा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ हो । जबसम्म विद्यार्थीमा जबर्जस्त गाडिएको यस्तो मनोविज्ञान हटाउन सकिँदैन, तबसम्म अरू कुनै सूत्रले यसको समाधन दिन सक्दैन ।
(आचार्य अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष हुन् )
यो आलेख शनिवारको नयाँ पत्रिकाबाट लिइएको हो ।